Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ka qeyb galay xaflad ay ku qalin badalanayeen arday Jaamacadeed – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ka qeyb galay xaflad ay ku qalin badalanayeen arday Jaamacadeed
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galay xaflad ay ku qalan badalanayeen ku dhawaad lix boqol oo arday oo dbameysatay waxbarashada heerka koowaad ee Jaamacadda Salaama kaasi oo lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa Guddoomiyaha Ururka dhaqaatiirta ahna Agaasimaha Isbitaal Madiina Dr Maxamed Yuusuf oo goobta ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardayda dhameeysatay kuliyadda cafimadka, isagoo kula dar daarmay inay u sinaadaan daaweynta bulshada.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdulle Jaabiri ayaa bogaadiyay ardayda, isagoo hay’adaha caafimaadka ugu baaqay inay fursado shaqo siiyaan ardayda ka qalin badalaneysa Jaamacadaha dalka.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waalidiinta iyo macalimiinta Jaamacadda uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen ardayda maanta ka aflaxday Jaamacadda Salaama, waxaana uu ardayda kula dar daarmay in cilmiga ay barteen ugu adeegaan bulshadooda.
Ardaydaan ka qalin badalaneysa kuliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Salaama ayaa ugu dambeyn la guddoonsiiyay shahaadooyin.
Madaxweynaha Hirshabelle oo u mahadceliyay dadkii ka qeybqatay gargaarkii shacabka Beledweyne "SAWIRRO"